Manchester United waa kooxda dunida ugu caansan – Gool FM
Manchester United waa kooxda dunida ugu caansan
Kaafi January 3, 2017
(London) 03 Jan 2016. Manchester United waxaa loogu coodeeyey in ay tahay kooxda dunida ugu caansan, waxaa ku dhawaaqay aqristeyaasha Goal.
Kaddib markii la qabtay coodeyn dunida oo dhan ah oo ay ka qeyb qaateen 42,000, Reds Devils ayaa kaalinta kowaad ku soo baxday.
Kooxda ka dhisan Old Trafford waa laga yaabaa in ay hoos uga dhacday loolanaddii Premier League-ga iyo Champions League tan iyo markii uu ka tagay Sir Alex Ferguson balse taas garaafo uma geysan caannimadooda caalamka.
United waxa ay codadka la dhiibtay ka heshay 23% (saddex iyo labaatan boqolkiiba), waxaa si aan la yaab lahayn kaalinta labaad iyo saddexaad kala galay Barcelona iyo Real Madrid iyada oo dhinaca reer Catalans ay xifaaliyeyaashooda ka guuleysteen waxa ayna heleen 18 halka Real Madrid heshay 16 boqolkiiba.
Kooxda difaacaneysa Champions League-ga waxa ay In badan ka sarreeysaa Chelsea oo kaalinta afraad ku jirta oo heshay 8% waxaana hal u jirta Liverpool.
AC Milan waa kooxda ugu caansan Italia waxa ayna heshay 117 in ka badan inta ay heshay Juventus oo ka dhigan 6%.
DALALKA CODADKA AY KOOX WALIBA KA HESHAY
Barcelona waxa ay kaalinta labaad ka gashay codadka laga soo bixiyey United Kingdom (16% codadka Britain, waxaa ka horreeysa oo kaliya Manchester United oo ka heshay 28%,, waxa ay ka sarreeysaa Chelsea oo heshay 11% iyo Real Madrid 10%.
Dalalka kale ee Europe, badi waxa ay u coddeeyeen kooxaha El Classico. Spain, Netherlands, Austria, Hungary iyo wadamada Scandinavian-ka, Barca ayaa gacanta sare inta badan ku lahayd, halka Real ay ku saramartay Croatia.
Sida ay mar walba ahaan lahayd, Germany waxaa boqoro ka ahaa Bayern Munich, Borussia Dortmund oo heshay 16% ayaa ka hormartay Real iyo Barca oo labaduba helay 14%.
United waxa ay si la yaab leh ugu caansanaatay Aasiya, hase ahaatee, waxa ay ka heshay 56% dalka Iran, waxa ay kaalinta kowaad ka gashay Malaysia, Thailand iyo Australia. Yeelkeedee, Indonesia waxa ay taageereen AC Milan sida Serbia. Dhinaca Koonfurta America, Colombia waxa ay 33% siiyeen Inter, halka Chile ay u muuqdan kuwo jecel Arsenal, Brazil waxa ay doorteen Real Madrid.
Waa kee ciyaaryahanka qura ee uu xalay Mourinho gegida ugu galay oo uu HAB siiyey?
Fernandinho oo ganaax afar kulan ah garka loo galin karo